Suavecito OG Deodorant | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Beard, Mustache, Body & Fragrances › Suavecito - OG Deodorant
Single - MMK 25,000 MMK3Pack - MMK 73,000 MMK
--Long-Lasting | Classic Stick Deodorant--
လူကြိုက်များလှတဲ့ Suavecito ရဲ့ Original ရနံ့ကို သင့်အတွက် တာရှည်ခံပြီး တစ်နေ့တာအနံ့ဆိုးများမှကာကွယ်ပေးကာ၊ သင်းပြံ့စွဲကျန်နေစေမည့် ချိုင်းလိမ်း Deodorant အနေဖြင့်ရရှိနိုင်နေပါပြီ။
Classic Deodorant အတောင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ Aluminum ပါရှိခြင်းမရှိသောကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးကင်းရုံသာမက မွှေးရနံ့တာရှည်ခံပြီး၊ ချိုင်းကြားပွန်းထိခြင်းများကိုကာကွယ်ပေးသောကြောင့် အမျိုးသားများနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်ရှိထားသင့်သည့် အသုံးအဆောင်အမျိုးအစားများထဲပါဝင်ပါသည်။
အသုံးပြုပုံ: ဘူးအဖုံးကိုဖွင့်ပြီး Deodorant ကို အောက်မှလှည့်ပြီးတင်၍ ချိုင်းတွင်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ ရေချိုးပြီးစအချိန် သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီးပါက ဘူးအဖုံးကိုလုံချုံစွာပိတ်ပြီး၊ အေးမြသောနေရာတွင်ထားပါ။
လူကြိုက်များသည့် Suavecito Original အမွှေးရနံ့
Classic Deodorant အတောင့်အမျိုးအစား
Experience the alluring scent of Suavecito now available inadeodorant.
Designed for men who seek the best, it’s long lasting and guaranteed to have you smelling great all day. This formula does not contain toxic aluminum, making it safe for even the most sensitive skin.
We’re taking things convenient with classic twist-up container. The perfect size to use at home or while traveling. Discrete and stylish but bold and powerful. Make this your go-to deodorant in any situation, we promise it won't let you down.
Suavecito Original Fragrance
Classic Deodorant Stick & Convenient Twist Up Design